ထူးဆန်းတဲ့ KBZ ကလင်ဒါ...(ကျက်သီးထလောက်အောင် တိုက်ဆိုင်လွန်းပါတယ်) - Channel Lover
သူများပြောစကားနဲ့ လမ်းမဆုံးတတ်တဲ့ ကျမကတော့ မရရအောင်ရှာပြီး အတည်ပြုထားလိုက်တယ်…
ပုံတွေဟာ ကျက်သီးထလောက်အောင် တိုက်ဆိုင်လွန်းပါတယ်…ရေးဆွဲထားတဲ့ ပန်းချီဆရာ တစ်ယောက်စီတိုင်းရဲ့ စိတ်ကူးတွေ အိပ်မက်တွေဟာ ဘယ်လိုပုံစံ ဖော်ဆောင် ထားသလည်း မသိရပေမယ့် ကြည့်ပြီး အဓိပ္ပာယ်များစွာနဲ့ စဉ်းစားရတဲ့ ပုံတွေကြီးပါပဲ…
ဒါက ကလင်ဒါရဲ့ အဖုံးပါ…
နိုင်ငံတော်ဟာ သာယာဝပြောနေတယ် …အေးဆေးတယ် တည်ငြိမ်တယ်…
စာတွေအများကြီးရေးထားတယ်…မှုန်တီမှုန်ဝါးနဲ့ ရေးထားတဲ့စာမှာ မြန်မာပြည်အလယ်ပိုင်းဆိုတာ မြင်ရသလို ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ လူသန်းပေါင်းများစွာ ဆိုတဲ့စကားစုကို မြင်ရတယ်…
ပြီးတော့ လုံခြုံရေးခါးပတ် လုံခြုံရေးဦးထုပ် လုံခြုံရေးဖိနပ် စီးဖို့ တိုက်တွန်းထားပြန်တယ်…”တစ်မူး တစ်ပဲ အမြဲလွဲ” ဆိုတဲ့စာရော “ဆရာမဖြစ်” ဆိုတဲ့စကားလုံး “အမြင့်ဆုံးနေရာမှာရှိ ပန်းရံဆရာကြီးငါ့အဖေ”ဆိုတဲ့စကားစုတွေ..
ကြက်ခြေနီဦးထုပ်ဆောင်းထားတဲ့ လူငယ်လေးတွေ သူတို့ကိုင်ထားတာ ဒိုင်းများလား…လူရိပ်မဲလေးဟာ ကျဆုံးသွားတဲ့ အာဇာနည်တွေကို ကိုယ်စားပြုသလား….
ဒီပုံဟာ ဝှက်စာတွေ အများကြီးလိုမြင်ရတယ်…
ပန်းချီဆရာဟာ စိတ်ကူးထဲကအတိုင်းဆွဲခဲ့တာဖြစ်ပေမယ့် 2021 ရဲ့ ဖေဖော်ဝါရီဟာ ပုံထဲကလိုပဲ ပျော်စရာ မကောင်းခဲ့ဘူး…
ရှေ့ဆုံးမှာ မြင်ရတဲ့ လူအုပ်ဟာ အထိကရုန်းတစ်ခုအသွင်မြင်ရတယ် …အလယ်လောက်က လူတွေက နေရာတွေကိုစွန့်ခွာနေတဲ့ပုံစံပေါ်ပြီး ဘေးထောင့်က လူတွေကတော့ တစ်ခုခုကို စိတ်ဝင်တစားကြည့်နေတဲ့ပုံပေါ်တယ်….
(၃)လပိုင်းဟာ အခက်ခဲဆုံးနဲ့ အရှုပ်ထွေးဆုံး ပုံရိပ်အများဆုံးကို သုံးထားတယ်…
ကျမအနေနဲ့တော့ ပထမ အရေးအခင်းမှာ ဖြစ်နေတဲ့ပုံစံ ဒုတိယ လူနေအိမ်တွေစွန့်ခွာရတဲ့ပုံစံ ခုထိ မြင်နေခဲ့ရပြီးဖြစ်တယ်…
နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ စိတ်ဝင်တစား ကြည့်နေတာဟာ ရာဇဝတ်သား အာဏာရူးတွေကို တရားစီရင်တာဖြစ်ပါစေလို့ ကျမဆုတောင်းမိပါရဲ့…
ကျမတို့နေတာ လက်ယာတောင်ကျွန်းမို့ သြဘာနမိတ်ကို ကောင်းတာပဲယူမယ် သူသေ သူသေ ကျဆုံးပါစေရှင်…
ဘုရားစေတီကို ဆေးသုတ်နေတဲ့ ပျံနေတဲ့ ဦးဇင်းတွေ လူတွေကို မြင်ရတယ်…
အောက်မှာတော့ မိသားစုလေး တစ်စုဟာ ဘုရားဖူးပြီး ဝတ်ရွတ်နေကြတယ်…
သံဃာတွေသန့်စင်သွားမယ် တရားဓမ္မတွေ ပြန်လွှမ်းလာမယ် မင်းရော သံဃာရောဟာ သီလ သမာဓိ ညာဏ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူတွေ ပြန်လည်ဦးဆောင်လာမယ် ပြည်သူတွေဟာလည်း ဓမ္မကိုချစ်မြတ်နိုးလာမယ် သာသနာ သန့်စင်လာမယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကိုပဲ ယူချင်တယ်…
ဒါဟာ မြစ်ချောင်းတွေကို ပုံဖော်ထားတဲ့အတွက် ဧရာဝတီကအစ မြစ်ချောင်းတွေ ပြန်လည်ကောင်းမွန်သန့်စင်လာတယ်လို့ ယူဆချင်တယ်…
ရေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ကမ်းရိုးတမ်း လုပ်ငန်းအောင်မြင်လာမယ့် နမိတ်ဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပါပဲ…
မြစ်နား ချောင်းနား ပင်လယ်နား နီးတဲ့ မြို့တွေ ကြီးပွားကြပါစေ …
ကျမတူမက ဒေါက်တာ ဆာဆာနဲ့ တူတယ်တဲ့…
စာအုပ်တွေနဲ့ အေးဆေးနေတဲ့ ပုံရိပ်က ပညာကို ကိုယ်စားပြုပါစေ…ပညာရေးမြင့်မားလာတဲ့ အခြေအနေဖြစ်ပါစေ…
ဆရာ ဆရာမများအတွက်လည်း အေးချမ်းတဲ့ ပညာရေးစနစ် ဖော်ဆောင်နိုင်တဲ့ ဂုဏ်ယူဖွယ်ကိစ္စတွေရှိပါစေ…
ရွှေရောင်တွေ တောက်ပနေတဲ့ မန္တလေးနန်းတော်ကြီး…
ရွှေမန္တလေးဟာ အားယူပြီး ရွှေရောင်တွေပြန်လွှမ်းလာတဲ့ နမိတ်ဖြစ်ပါစေ…နန်းတော်ကြီးဟာ 2021ကအစ ဗိသုကာလက်ရာတွေနဲ့ ကမ္ဘာမှာဂုဏ်ယူနိုင်တဲ့ တစ်နေရာဖြစ်လာစေချင်ပါတယ်…
ဖက်ဒရယ်ကိုဖော်ဆောင်နိုင်ပါစေ…တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာ အေးချမ်းပြီး စီးပွားရေး လူမှုရေး ကျန်းမာရေး အစစအရာရာ တိုးတက်ပါစေ…
ခမောက်ဆောင်းထားတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက် သူ့ရဲ့နောက်မှာ ရောင်စုံတောင်တန်း….
အမေစုဦးဆောင်တဲ့ တောင်တန်းမြေပြန့် စည်းလုံးမှုကို ဖော်ဆောင်နိုင်ပါစေ…ပြုံးနေတဲ့မျက်နှာနဲ့ သနပ်ခါးရယ် ဝတ်ထားတဲ့ပုံစံရယ် လွယ်အိတ်လေးရယ် ထုံးဖွဲ့ထားတဲ့ ဆံထုံးပုံစံရယ်…
နိုင်ငံတော်ကြီးဟာ ဖက်ဒရယ်အစစ်ကိုဦးတည်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်…
ဘုရားသွား ကျောင်းတက် ပျော်ရွှင်စရာနေ့ရက်တွေ ရောက်ရပါစေ…
တောရော မြို့ပါ မကျန် ငြိမ်းချမ်းပျော်ရွှင်ရမယ့် နမိတ်လို့ ယူချင်ပါတယ်…
ယောင်ပေစူးလေးတွေဟာ ပျော်ရွှင်စွာ မြန်မာ့ရိုးရာနည်းအတိုင်း ကစားနေကြတယ်…မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု ပြန်လည်ဦးမော့လာပါစေ…
ကျမတို့ နိုင်ငံသစ်ကြီးဟာ အရောင်အသွေးစုံ ကာလာစုံ ပြန်လည်ဦးမော့လာပြီး ကမ္ဘာ့အလယ်မှာ မြန်မာဟေ့လို့ ဝင့်ကြွားနိုင်တဲ့နေ့ရက်တွေ ဖြစ်ပါစေ…
လက်သုံးချောင်းနဲ့ ကမ္ဘာကျော်မယ့် မြန်မာ့ မျိုးဆက်တွေ ဖြစ်ပါစေ…
ထူးဆနျးတဲ့ KBZ ကလငျဒါ…(ကကျြသီးထလောကျအောငျ တိုကျဆိုငျလှနျးပါတယျ)
သူမြားပွောစကားနဲ့ လမျးမဆုံးတတျတဲ့ ကမြကတော့ မရရအောငျရှာပွီး အတညျပွုထားလိုကျတယျ…
ပုံတှဟော ကကျြသီးထလောကျအောငျ တိုကျဆိုငျလှနျးပါတယျ…ရေးဆှဲထားတဲ့ ပနျးခြီဆရာ တဈယောကျစီတိုငျးရဲ့ စိတျကူးတှေ အိပျမကျတှဟော ဘယျလိုပုံစံ ဖျောဆောငျ ထားသလညျး မသိရပမေယျ့ ကွညျ့ပွီး အဓိပ်ပာယျမြားစှာနဲ့ စဉျးစားရတဲ့ ပုံတှကွေီးပါပဲ…
ဒါက ကလငျဒါရဲ့ အဖုံးပါ…
နိုငျငံတျောဟာ သာယာဝပွောနတေယျ …အေးဆေးတယျ တညျငွိမျတယျ…
စာတှအေမြားကွီးရေးထားတယျ…မှုနျတီမှုနျဝါးနဲ့ ရေးထားတဲ့စာမှာ မွနျမာပွညျအလယျပိုငျးဆိုတာ မွငျရသလို ရနျကုနျမှာရှိတဲ့ လူသနျးပေါငျးမြားစှာ ဆိုတဲ့စကားစုကို မွငျရတယျ…
ပွီးတော့ လုံခွုံရေးခါးပတျ လုံခွုံရေးဦးထုပျ လုံခွုံရေးဖိနပျ စီးဖို့ တိုကျတှနျးထားပွနျတယျ…”တဈမူး တဈပဲ အမွဲလှဲ” ဆိုတဲ့စာရော “ဆရာမဖွဈ” ဆိုတဲ့စကားလုံး “အမွငျ့ဆုံးနရောမှာရှိ ပနျးရံဆရာကွီးငါ့အဖေ”ဆိုတဲ့စကားစုတှေ..
ကွကျခွနေီဦးထုပျဆောငျးထားတဲ့ လူငယျလေးတှေ သူတို့ကိုငျထားတာ ဒိုငျးမြားလား…လူရိပျမဲလေးဟာ ကဆြုံးသှားတဲ့ အာဇာနညျတှကေို ကိုယျစားပွုသလား….
ဒီပုံဟာ ဝှကျစာတှေ အမြားကွီးလိုမွငျရတယျ…
ပနျးခြီဆရာဟာ စိတျကူးထဲကအတိုငျးဆှဲခဲ့တာဖွဈပမေယျ့ 2021 ရဲ့ ဖဖေျောဝါရီဟာ ပုံထဲကလိုပဲ ပြျောစရာ မကောငျးခဲ့ဘူး…
ရှဆေုံ့းမှာ မွငျရတဲ့ လူအုပျဟာ အထိကရုနျးတဈခုအသှငျမွငျရတယျ …အလယျလောကျက လူတှကေ နရောတှကေိုစှနျ့ခှာနတေဲ့ပုံစံပျေါပွီး ဘေးထောငျ့က လူတှကေတော့ တဈခုခုကို စိတျဝငျတစားကွညျ့နတေဲ့ပုံပျေါတယျ….
(၃)လပိုငျးဟာ အခကျခဲဆုံးနဲ့ အရှုပျထှေးဆုံး ပုံရိပျအမြားဆုံးကို သုံးထားတယျ…
ကမြအနနေဲ့တော့ ပထမ အရေးအခငျးမှာ ဖွဈနတေဲ့ပုံစံ ဒုတိယ လူနအေိမျတှစှေနျ့ခှာရတဲ့ပုံစံ ခုထိ မွငျနခေဲ့ရပွီးဖွဈတယျ…
နောကျဆုံးတဈခုအနနေဲ့ စိတျဝငျတစား ကွညျ့နတောဟာ ရာဇဝတျသား အာဏာရူးတှကေို တရားစီရငျတာဖွဈပါစလေို့ ကမြဆုတောငျးမိပါရဲ့…
ကမြတို့နတော လကျယာတောငျကြှနျးမို့ သွဘာနမိတျကို ကောငျးတာပဲယူမယျ သူသေ သူသေ ကဆြုံးပါစရှေငျ…
ဘုရားစတေီကို ဆေးသုတျနတေဲ့ ပြံနတေဲ့ ဦးဇငျးတှေ လူတှကေို မွငျရတယျ…
အောကျမှာတော့ မိသားစုလေး တဈစုဟာ ဘုရားဖူးပွီး ဝတျရှတျနကွေတယျ…
သံဃာတှသေနျ့စငျသှားမယျ တရားဓမ်မတှေ ပွနျလှမျးလာမယျ မငျးရော သံဃာရောဟာ သီလ သမာဓိ ညာဏျပညာနဲ့ပွညျ့စုံတဲ့သူတှေ ပွနျလညျဦးဆောငျလာမယျ ပွညျသူတှဟောလညျး ဓမ်မကိုခဈြမွတျနိုးလာမယျ သာသနာ သနျ့စငျလာမယျဆိုတဲ့ အဓိပ်ပာယျကိုပဲ ယူခငျြတယျ…
ဒါဟာ မွဈခြောငျးတှကေို ပုံဖျောထားတဲ့အတှကျ ဧရာဝတီကအစ မွဈခြောငျးတှေ ပွနျလညျကောငျးမှနျသနျ့စငျလာတယျလို့ ယူဆခငျြတယျ…
ရနေဲ့ပတျသကျတဲ့ ကမျးရိုးတမျး လုပျငနျးအောငျမွငျလာမယျ့ နမိတျဖွဈခဲ့ရငျတော့ အကောငျးဆုံးပါပဲ…
မွဈနား ခြောငျးနား ပငျလယျနား နီးတဲ့ မွို့တှေ ကွီးပှားကွပါစေ …
ကမြတူမက ဒေါကျတာ ဆာဆာနဲ့ တူတယျတဲ့…
စာအုပျတှနေဲ့ အေးဆေးနတေဲ့ ပုံရိပျက ပညာကို ကိုယျစားပွုပါစေ…ပညာရေးမွငျ့မားလာတဲ့ အခွအေနဖွေဈပါစေ…
ဆရာ ဆရာမမြားအတှကျလညျး အေးခမျြးတဲ့ ပညာရေးစနဈ ဖျောဆောငျနိုငျတဲ့ ဂုဏျယူဖှယျကိစ်စတှရှေိပါစေ…
ရှရေောငျတှေ တောကျပနတေဲ့ မန်တလေးနနျးတျောကွီး…
ရှမေန်တလေးဟာ အားယူပွီး ရှရေောငျတှပွေနျလှမျးလာတဲ့ နမိတျဖွဈပါစေ…နနျးတျောကွီးဟာ 2021ကအစ ဗိသုကာလကျရာတှနေဲ့ ကမ်ဘာမှာဂုဏျယူနိုငျတဲ့ တဈနရောဖွဈလာစခေငျြပါတယျ…
ဖကျဒရယျကိုဖျောဆောငျနိုငျပါစေ…တိုငျးရငျးသားဒသေတှမှော အေးခမျြးပွီး စီးပှားရေး လူမှုရေး ကနျြးမာရေး အစစအရာရာ တိုးတကျပါစေ…
ခမောကျဆောငျးထားတဲ့အမြိုးသမီးတဈယောကျ သူ့ရဲ့နောကျမှာ ရောငျစုံတောငျတနျး….
အမစေုဦးဆောငျတဲ့ တောငျတနျးမွပွေနျ့ စညျးလုံးမှုကို ဖျောဆောငျနိုငျပါစေ…ပွုံးနတေဲ့မကျြနှာနဲ့ သနပျခါးရယျ ဝတျထားတဲ့ပုံစံရယျ လှယျအိတျလေးရယျ ထုံးဖှဲ့ထားတဲ့ ဆံထုံးပုံစံရယျ…
နိုငျငံတျောကွီးဟာ ဖကျဒရယျအစဈကိုဦးတညျနိုငျပါစလေို့ ဆုတောငျးပါတယျ…
ဘုရားသှား ကြောငျးတကျ ပြျောရှငျစရာနရေ့ကျတှေ ရောကျရပါစေ…
တောရော မွို့ပါ မကနျြ ငွိမျးခမျြးပြျောရှငျရမယျ့ နမိတျလို့ ယူခငျြပါတယျ…
ယောငျပစေူးလေးတှဟော ပြျောရှငျစှာ မွနျမာ့ရိုးရာနညျးအတိုငျး ကစားနကွေတယျ…မွနျမာ့ယဉျကြေးမှု ပွနျလညျဦးမော့လာပါစေ…
ကမြတို့ နိုငျငံသဈကွီးဟာ အရောငျအသှေးစုံ ကာလာစုံ ပွနျလညျဦးမော့လာပွီး ကမ်ဘာ့အလယျမှာ မွနျမာဟလေို့ ဝငျ့ကွှားနိုငျတဲ့နရေ့ကျတှေ ဖွဈပါစေ…
လကျသုံးခြောငျးနဲ့ ကမ်ဘာကြျောမယျ့ မွနျမာ့ မြိုးဆကျတှေ ဖွဈပါစေ…